Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Qadar » Qatar Airways waxay calaamadeysaa 10 sano duullimaadyo Canada ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • News • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways ayaa calaamadeysay 10 sano duulimaadyadii Canada
Tan iyo 2011, ballanqaadkii Qatar Airways ee suuqa Canada wuxuu xoojiyay ganacsiga caalamiga, dalxiiska iyo isweydaarsiga dadka iyo dadka.
Safarka Qatar Airways ee Canada wuxuu bilaabmay Juunyo 2011 isaga oo saddex duulimaad toddobaadle ah ku tagaya Montréal.
Qatar Airways waligeed ma joojin duulimaadkeeda Montréal inta lagu gudajiray Cudurka faafa ee COVID-19.
Tan iyo markii ay bilaabatay duulimaadkeedii ugu horreeyay bishii Juun 2011, Qatar Airways waxay duulimaadyo ka badan 3,400 jeer ku dhex martay magaalooyinka Doha iyo Montréal.
Qatar Airways ayaa calaamadeysay taariikh taariikhi ah oo ay la yeelatay Kanada, iyadoo u dabaaldegeysa 10 sano oo guuleysatay tan iyo markii ay bilaabatay duulimaadkeedii u dhexeeyay Doha iyo Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Montréal-Trudeau (YUL). Safarka diyaaradda ee Canada wuxuu bilaabmay Juunyo 2011 isaga oo saddex duulimaad toddobaadle ah ku tagaya Montréal, markii dambena wuxuu ku sii fiday afar toddobaad toddobaadki Diseembar 2018 ka dibna wuxuu gaadhay adeeg maalinle ah Febraayo 2021
Qatar Airways Marnaba ma joojin duulimaadka Montréal inta lagu gudajiray Cudurka faafa ee COVID-19, diyaaradduna waxay sii wadaa inay siiso khadka nolosha dadka reer Kanada ee ku soo laabanaya waddankooda adduunka oo dhan. Ka dib markii ay si dhow ula shaqeysay dowladda Canada iyo safaaradaha ay leedahay markii ugu sareysay ee xaaladda degdegga ah ee caafimaadka adduunka, Qatar Airways waxay sidoo kale si ku-meel-gaar ah ugu shaqeysay seddex adeeg oo toddobaadle ah magaalada Toronto marka lagu daro duulimaadyo badan oo kiro ah oo ay ku tagtay Vancouver si ay gacan uga geysato keenista in ka badan 44,000 oo muwaadiniin Canadian ah iyo dadka deggan dibedda.
Tan iyo markii ay bilaabatay duulimaadkeedii ugu horreeyay bishii Juun 2011, Qatar Airways waxay duulimaadyo ka badan 3,400 jeer ku kala bixisay inta u dhaxeysa Doha iyo Montréal, taasoo u sahashay ku dhowaad 1 milyan oo ganacsi iyo rakaab xilli firaaqo ah inay ku xirmaan meelaha caanka ah ee Afrika, Aasiya, Bariga Dhexe iyo meelo ka sii fog. Adeegga Montréal waxaa hadda ka shaqeeya shirkadda Qatar Airways 'si casri ah oo shidaal-ku-ool ah Airbus A350-900 oo ka kooban 36 kursi oo ah Abaal-marinta Qsuite Business Class iyo 247 kursi oo ka tirsan Heerka Dhaqaalaha. Qatar Airways Cargo sidoo kale waxay bixisaa in kabadan 100 tan oo ah xamuul xamuul usbuuc kasta jiho kasta oo ku saabsan wadada Doha-Montréal -Doha.
Madaxa Fulinta Kooxda Qatar Airways, Mudane Mr. Akbar Al Baker, wuxuu yiri: “Kanada marwalba wey noo dhaweyd markii aan joognay Qatar Airways. Waxaan xasuustaa hankii aan dareemay markii ugu horaysay ee aan hoos udhacno Montréal 2011, waanan ogaa markaa inay tani bilow u tahay xiriir adag oo waara oo lala yeesho Kanada. Sanadihii la soo dhaafey waxaan markhaati ka nahay waxtarka adeegyadeenu u leeyihiin Kanada oo ka sii dheereeya hadafkeenna ah isu keenidda dadka. Duulimaadyadeennu waxay u suura galisay safrayaasha adduunka oo dhan inay la kulmaan soo dhoweynta caanka ah ee Kanada iyadoo ay kaalmaynayso dhoofinta wax soo saarka Kanada suuqyada dibedda.